Al-Shabaab-kii kasoo baxsadey Kenya oo dib loo qabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab-kii kasoo baxsadey Kenya oo dib loo qabtay
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dadka degaanka ay arkeen raggan iyagoo kusii jeeda Garissa, oo wadooyinka ka qaldan, islamarkaana waydiinaya wadada ay u mari lahaayeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada Amaanka Kenya ayaa Maanta ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan saddex Maxbuux oo ku eedeysan inay katirsan yihiin Al-Shabaab, kuwaasoo Axadii kasoo baxsadey xabi ku yaalla Nairobi.
Booliska ayaa sheegay in saddexda ruux ay u carareen dhanka keynta Boni [Boni Forest], oo xuduud la leh Soomaaliya, iyagoo doonayay inay Al-Shabaab degaanada ay maamushu tagaan.
Waxay kasoo baxsadeen xabsiga lagu magacaabo Kamiti Maximum Security Prison, iyagoo lagu xiray degaanka Kitui County. Waxaa ka muuqday daal iyo haraad, kadib markii ay soo lugeeyeen masaafo dheer.
Waxaa la qabtay saacado kadib markii dadka degaanka ay sheegeen in lagu arkay suuqa Malalani ee ku yaala degaanka Endau, oo 100 kiilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Kitui, halkaas oo ay ka soo iibsadeen caano, biyo iyo buskud.
Dadka degaanka ayaa sheegay in ay shakiyeen markii seddexda qof ay weydiiyeen jihooyinka isku xira Gaarisa iyo Keymaha Boni ee Lamu. Mid ka mid ah dadka baxsadka ah ayaa lugaha ka bararay oo dhutinaya, sida ay sheegeen dadka degaanka.
Kahor inta aan la qaban, waxay dowladda Kenya shaacisay abaal-marin lacageed oo labaatan milyan oo dollar ah, si ay u fududaato soo qabashadooda oo dadkana usoo sheegaan.
Argagixisada oo lagu kala magacaabo Musharraf Abdalla Akhulunga [Zarkarawi], Maxamed Cali Abikar iyo Joseph Juma Odhiambo, ayaa Axadii ka baxsaday xabsiga aadka loo ilaaliyo ee dalkaasi.
Musharaf ayaa loo xiray Sebtembar 30, 2012 doorkii uu ku lahaa weerar argagixiso oo la fashiliyay oo lala damacsanaa Xarunta Baarlamaanka Kenya.
Maxamed ayaa la xiray kadib markii uu ku lug lahaa weerarkii Jaamacadda Gaarisa 2-dii April 2015-kii, waxaana lagu xukumay xabsi 41 sano ah.
Waxaa lala xukumay Hassan Edin Hassan iyo Rashid Charles Mberesero oo Tanzania u dhashay, kuwaas oo lagu xukumay xabsi daa'in balse bishii November ee sannadkii hore isku dilay gudaha Xabsiga Kamiti.